Fiarovana ny honko sy ny drakaka: atrikasa maro no efa vita fa tsy mahomby hatramin’izao | NewsMada
Fiarovana ny honko sy ny drakaka: atrikasa maro no efa vita fa tsy mahomby hatramin’izao
Ny 17 oktobra teo, natao teto Antananarivo, ny fampivondronana ny fehin-kevitra tapaka tany Morondava sy Ambanja momba ny fiarovana ny drakaka. Niainga avy amin’ny vondron’ny mpanjono sy ny mpandraharaha, ny minisiteran’ny Jono sy ny harena anaty rano, miaraka amin’ny fikambanana maromaro (ONG Blue Ventures, WWF, CI, Mihari).
Miantoka ny fahamaroan’ny drakaka sy ny kalitaony ny fisian’ny ala honko any amin’ny ilany andrefan’i Madagasikara. Tombanana 325.000 ha ny faritra tokony hisy izany, saingy rava ny ankamaroan’ny ala honko izao, noho ny fitrandrahana tafahoatra. Mihena manaraka izany koa ny vokatra azo, vao mainka manosika ireo mpanjono mitrandraka ireny ala ireny, maka izay mbola azo raisina. 7.500 t isan-taona ny vokatra azo, raha voahaja ny fepetra rehetra, araka ny tarehimarika nomen’ny minisiteran’ny Jono.
Ny taona 2006, efa nisy atrikasa namoahana fandaharanasa ho an’ny teknikan’ny jono ankapobeny, nambara fa tsotra nefa kely masonkarena. Nametraka laminasa ho fanajariana ny jono drakaka ihany koa ny fanjakana, ny taona 2007 momba ny refiny faran’ny kely (10 cm) sy fiarovana ireo mbola manatody.
Dimy taona taorian’izay, tsy nahitana fiovana izany, ka ny taona 2012, nanaovana atrikasa indray, nandraisana fepetra maromaro, toy ny fanavahana ireo karazam-bokatra azo aondrana sy ny firenena handefasana izany ; fanatsarana ny varotra amin’ny fiarovana velona azy ireny aorian’ny nanjonoana azy. Ny taona 2013, mbola nisy fepetra noraisina, araka ny tetikasa momba ny jono iarahan’ny Vondrona eoropeanina sy ny FAO.
Miakatra ny tinady any ivelany
Miakatra ny tinady any ivelany, ka izay no antony lehibe naharava ny ampahany be indrindra amin‘ny tontolo iainana misy ireo harena an-dranomasina ireo. Raha mbola azo lazaina fa jono fanampiny ny drakaka tany aloha, taorian’ny trondro sy ny makamba, ankehitriny, iarahan’ny mpanjono mitrandraka ireo karazany telo ireo.
Ahoana ny fiarovana ireo harena an-dranomasina ireo ? Dia izao mbola nanaovana atrikasa hafa izao indray, nanolorana vahaolana, tsy mifankaiza amin’ny efa nofaritana tany aloha, ohatra, ny fiarovana ny ala honko ; fanofanana ireo mpanjono sy fanamoràna ny fahazoan’izy ireo fitaovana ; fanohizana ny fikarohana, sns.